Umkhiqizi kanye nomhlinzeki we-China CNC | I-Mestech
Ukulingiswa kwe-Die & Stamping
CNC machining ubuchwepheshe obusebenzisa ithuluzi lomshini wokucacisa we-Computerised Numerical Control ukucubungula umsebenzi. Izinhlobo zamathuluzi omshini asetshenziselwa ukucubungula afaka i-CNC lathe, umshini wokugaya we-CNC, umshini we-CNC oyisidina nomshini wokugaya, njll.
IMESTECH ifakwe inani elithile lezinto zokusebenza eziphakeme ze-CNC, neqembu elihle kakhulu labonjiniyela bokuqamba kanye nabasebenza ngemishini nenqubo eqinile. Siyahlonishwa ngokunikeza amakhasimende ethu imikhiqizo esezingeni eliphakeme, ukulethwa ngesikhathi esifanele nezinsizakalo.
Imishini nemishini yezimboni ingumama wemboni yesimanje. Imboni eyenza imishini yokukhiqiza nemishini imboni yokucubungula ngomshini. Izinga lobuchwepheshe lokucubungula ngomshini linquma ileveli yekhwalithi yemishini nemishini.
Kuyini ukunemba kwemishini?
Imishini inqubo yokukhiqiza yokususa okokusebenza ku-workpiece ukuthola isimo nosayizi odingekayo. Imishini esetshenziselwa ukucubungula imishini ibizwa ngamathuluzi omshini. Izinto zokwenziwa kwezingxenye ezenziwe ngomshini zifaka insimbi, izinsimbi ezingenayo i-ayoni nokunye ukwakheka nezinsimbi ezizinzile, kanye namapulasitiki aqinile nemikhiqizo yezinkuni. Imishini ingafinyelela izingxenye zokunemba okuphezulu, ngakho-ke sikubiza ngokuthi ukucacisa imishini. Kuyindlela eyinhloko yokucubungula yokukhiqiza izingxenye ezahlukahlukene zemishini.
Ngokuthuthukiswa kobuchwepheshe bekhompyutha, ubuchwepheshe bokulawulwa kwedijithali kwezimboni bufakwa kumishini yamathuluzi omshini, okuqaphela ukufakwa kwedijithali nokwenza okuzenzakalelayo komsebenzi wethuluzi lomshini futhi kuthuthukise kakhulu ukusebenza kahle kokukhiqiza nokusebenza ngokunemba. Lolu hlobo lobuchwepheshe olusebenzisa uhlelo lwekhompiyutha ukusebenzisa ukucubungula ithuluzi lomshini lubizwa ngokuthi ubuchwepheshe bokulawula ukucubungula kwamanani. Ithuluzi lomshini elisebenzisa uhlelo lokusebenzisa ikhompyutha liyithuluzi lokulawula izinombolo (umshini we-CNC).
Kuyini CNC Machining?
CNC machining (ngokunemba machining) kuyinqubo yokukhiqiza. Amathuluzi omshini asebenza ngaphansi kokulawulwa kwezinhlelo zekhompyutha. Izinhlelo zekhompyutha zifakwe amakhodi ukuhambisa abasiki ukuze bakhiqize izingxenye ezenziwe ngomshini ezihambelana nosayizi wohlelo olunamakhodi (olubizwa ngekhodi ye-G).
Imishini ye-CNC yinqubo yokukhiqiza lapho isoftware yekhompyutha ehlelwe ngaphambilini ikhombisa ukuhamba kwamathuluzi ezitshalo nemishini. Le nqubo ingasetshenziselwa ukulawula uchungechunge lwemishini eyinkimbinkimbi, kusuka kuma-grinders kanye ne-lathes kuya kumishini yokugaya nama-routers. Ngokusebenzisa i-NC machining, imisebenzi yokusika enzinhlangothi ezintathu ingaqedwa ngeqoqo lezinto ezenzayo.
Imvamisa, isoftware ye-CAM (Computer Aided Manufacturing) isetshenziswa esitolo somshini ukufunda ngokuzenzakalela amafayela we-CAD (Computer Aided Design) bese ikhiqiza uhlelo lwekhodi lwe-G ukulawula amathuluzi womshini we-CNC.
Lithini ithuluzi lomshini we-CNC?
Ithuluzi lomshini we-CNC iyithuluzi lomshini elihlanganisa ithuluzi lomshini jikelele nohlelo lwekhompyutha.
Amathuluzi emishini alawulwayo afaka ama-grinders, imishini yokugaya, ama-lathes, ama-drill namaplanethi.
Ngo inqubo CNC lathe ukucutshungulwa, ukuzimisela CNC ukucutshungulwa umzila ngokuvamile ulandela lezi zimiso ezilandelayo:
(1) Ukunemba nobuso oburhabaxa bento yokusebenza ezocutshungulwa kufanele kuqinisekiswe.
(2) Yenza umzila wokucubungula ube mfushane, unciphise isikhathi sokuhamba esingenalutho futhi uthuthukise ukusebenza kahle kokucubungula.
(3) Yenza lula umthwalo wokubala wezibalo ngangokunokwenzeka futhi wenze lula inqubo yokucubungula.
(4) Kwezinye izinhlelo ezingasetshenziswa kabusha, ama-subroutines kufanele asetshenziswe.
Izinhlobo zamathuluzi womshini we-CNC:
Imishini yokugaya 1.CNC
2.CNC machining isikhungo.
4.Electrical Ukuchithwa CNC Machines.
Umshini wokusika we-5.CNC
6.CNC ngokunemba ukugaya umshini
Ukukhishwa kukagesi umshini we-CNC
Isici se-CNC machining
Umshini we-CNC unqoba ukuphela kokusebenza kokusebenza kwamathuluzi wendabuko wendabuko. Inokusebenza kahle okuphezulu, ikhwalithi ezinzile, usayizi oqondile nokuzenzakalelayo. Ifanele kakhulu ukucacisa okuphezulu nokukhiqizwa kwekhwalithi ephezulu. Imishini ye-CNC iyindlela edingekayo yokuthola izingxenye zokukhiqiza ngokunemba.
Ukusetshenziswa kwe-CNC machining
1. Nciphisa inani lamalungiselelo namathuluzi, futhi awudingi amathuluzi okulungisa anzima ukucubungula izingxenye ezinomumo oyinkimbinkimbi. Uma ufuna ukushintsha ukwakheka nosayizi wezingxenye, udinga kuphela ukuguqula izinqubo zokucubungula izingxenye, ezifanele ukwakhiwa nokuguqulwa kwemikhiqizo emisha.
2. Ikhwalithi yokucubungula i-CNC izinzile, ukucubungula ukucubungula kuphezulu, ukunemba kokuphindaphinda kuphezulu, futhi kungahlangabezana nezidingo zokucubungula zezindiza.
3. Ukusebenza kahle kokukhiqiza kuphakeme esimweni sokukhiqizwa okuhlukahlukene okuhlukahlukene nokuncane, okunganciphisa isikhathi sokulungiselela ukukhiqizwa, ukulungiswa kwamathuluzi omshini nokuhlolwa kwenqubo, futhi kunciphise nesikhathi sokusika ngenxa yokusetshenziswa kobungako bokusika obuhle kakhulu .
4. Amaphrofayli ayinkimbinkimbi angenakulinganiswa ukwenziwa ngomshini ngezindlela ezivamile, futhi angacubungula ezinye izingxenye ezingabonakali. Ngokufingqa, luhlobo lwezingxenye eziqondile ezinesakhiwo esiyinkimbinkimbi namaqoqo amancane emikhiqizo, njengama-asi aqondile, ama-optical fiber tail shins, izikhonkwane njalonjalo, afaneleka ngokwengeziwe.
Inkampani yakwaMestech inikezela ngamakhasimende ngezinsizakalo ezinemba kahle zemishini ezinhlobonhlobo zensimbi, izingxenye zepulasitiki. Uma ufuna eminye imininingwane, sicela uxhumane nathi.
Langaphambilini Die izingxenye ekubunjweni
Olandelayo: Izingxenye ngomshini
Cnc Machining Plastic Izingxenye